သင် မဖြစ်မနေ သိထားရမယ့် iPhone အတွက် အခြေခံ နားလည်မှု (၅) ချက် - iOS Banker Myanmar
ကျွန်တော်တို့ ရယ့် နေ့စဉ်ဘဝမှာ ဖုန်းတစ်လုံးကို အသုံးပြု နေရတယ် ဆိုတာ မဖြစ်မနေပါ။ ထိုများထဲမှ iPhone ကို ရွေးချယ် အသုံးပြု ကြတယ့် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ သူနဲ့ ပတ်သက်တယ့် Settings အခြေခံ နားလည်မှု လောက်ကိုတော့ တတ်ကျွမ်းထားမှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ သင်က iPhone နဲ့ သိပ်မရင်းနှီး သေးတယ့် သူဖြစ်စေ ယခင်က iPhone ကို သာမန်ရိုးကျ အသုံးပြု နေခဲ့သူ ဖြစ်စေ ခုAdmin ပြောပြမယ့် အခြေခံ (၅) ချက်က သင့်ရဲ့ iPhone အပေါ နားလည်ထားမှုကို တစ်ဆင့် မြင့်တင် ပေးနိုင်မှာပါ။
No.1 Data အစားဆုံး ဖြစ်နေတယ့် App ကို ဘယ်လို စမ်းစစ်မလဲ?
iPhone ကိုခုမှ စတင် အသုံးပြု ခြင်းပဲ ဖြစ်စေ သုံးနေရင်း တစ်ခါ တစ်လေမှာ ဖြစ်စေ Phone bill & data တွေ သောက်သောက်လဲ ကုန်သွားတာ မျိုး ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲ့လို ဖြစ်လာပြီ ဆိုရင် အရင်ဆုံး Settings-Cellular ကို သွားပြီး Cellular data ကိုသွားကြည့် ရပါမယ်။
အဲ့ဒီမှာ ဘယ် App က data အစားဆုံးဖြစ် နေတယ် ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ – တကယ်လို့ မကြည့် တတ်ဖူးဆိုရင် Cellular data ရဲ့ အောက်ဆုံးကို ဆွဲပြီး Reset Statistics ကို နှိပ်ထားလိုက်ပါ။ နောက် ၂၄ နာရီလောက် နေရင် နောက်တစ်ခါ လာကြည့်ပါက data အစားဆုံး ဖြစ်နေတယ့် App ကို သေချာပေါက် မြင်ရမှာပါ။
Data အစားဆုံး App က Facebook လို Social app ဆိုရင် video auto play လိုမျိူးတွေ ဖွင့်ထားရင် ပိတ်ချပေးပါ အခြား App ဆိုရင် တော့ ကိုယ်သုံးတယ့် ပုံစံနဲ့ ပြန်ချိန်ဆတာ အကုန်းဆုံးပါပဲ။ တကယ်လို့ ကိုယ်က email တွေ များတာဖြစ်ဖြစ် ဟို ဝင်ဒီ ဝင်များတယ့် Mail ရှိနေတယ် ဆိုရင် Settings-Password & Accounts ထဲက အောက်ဆုံး မှာ Fetch new data ရှိပါတယ် အဲ့က Push ကို ပိတ်ထား ပေးပါ။ Admin ဆိုရင် Mail တစ်ချက် Refresh ခေါက်ရင် 40 MB လောက်ကုန် ပါတယ် တစ်လ MB 700 ကျော်ကတော့ အမြဲတမ်းပါပဲ။
Golden rule သင် iPhone ကိုင်ရင် Package ဝယ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
No.2 Message & noti တွေ အခြားသူ ကောက်ကြည့်လို မမြင်ရအောင် ထိန်းချုပ်မယ်!
iPhone က ပုံမှန် အတိုင်းဆိုရင် ဝင်လာသမျှ Noti နဲ့ messages တွေကို screen ပေါမှာ ဘယ်သူ ဖွင့်ကြည့်ကြည့် အကုန် ပြပေးနေမှာပါ။ ဒီအချက်က အများနဲ့ နေတယ့်ချိန် ဖြစ်စေ ကိုယ့် privacy ကို အခြားသူ မသိစေခြင်တယ့် ချိန်ဖြစ်စေ အတော်လေး စိတ်ဒုက္ခ ရောက်ရပါတယ်။
ဒါကို ပြုပြင် ခြင်တယ် ဆိုရင် Settings-Notifications မှာ Show Previews ကို Always ကနေ When unlocked ပေးထား လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့် Fingerprint လေး တင်လိုက်မှ ဖြစ်စေ ကိုယ့် မျက်ခွက်ကြီး ပြလိုက်မှ ဖြစ်စေ Message ကို ဖတ်လို့ ရလာမှာပါ။
No.3 iPhone Storage မှာ Other တွေ တအား များနေရင်?
တစ်ခါလေ Adminတို့ တွေ Storage ဝင်စစ်တယ့် အချိန် အပေါကပုံလို Other တွေ တအားများ နေရင် ပြာသွားတတ် ပါတယ်။ “ဟာ” ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ ပေါ့? တကယ်တော့ ထင်ယောင် ထင်မှား ဖြစ်နေတာပါ iPhone က – ၂ မိနစ်ကနေ ၅ မိနစ် လောက်ထိ ဆက်စောင့် နေလိုက်ပါ ဒုတိယ ပုံလို Storage အစစ်မှန်ကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။
ဒီနေရာမှာ သတိပြုရမှာက Online Drive တွေပါ တွတ်ချက် တာမို့ Internet connection လိုအပ်ပါတယ်။ Other တွေ ပြောင်း မသွားခဲ့ရင် Restart ချပြီး Connection ကောင်းကောင်းနဲ့ ပြန်ဝင်ကြည့်ပါ မရသေးရင် WiFi သုံးပေးပါ။
နောက်တစ်ခုက တစ်ခါလေ Other က မျက်စိရှေ့တင် ပြောင်းလိုက် မပြောင်းလိုက် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် အဲ့ဒါက Internet နဲ့ Drive ကို Refresh လုပ်ပြီး storage ပြန်ပြန် တွက်တွက် ယူနေတာ ကြောင့်ပါ စိတ်မပူပါနဲ့ ပုံမှန်ပါပဲ တစ်ခါ ပြောင်းသွားတာ မြင်ရပြီးရင် ပြန်ထွက်ခဲ့လိုက်ပါ တစ်ခါကြည့် ရရင် တော်ရော်ပေါ့နော်။
No.4 Background App Refresh ကို ကိုင်တွယ်ခြင်း/
သင် သတိထားမိမှာပါ iPhone တွေက ပုံမှန် အားဖြင့်ကို Background မှာ apps တွေ သိပ်ပြီး Refresh နေလေ့ မရှိကြ ပါဖူး။ ဒါပေမယ့် သာမန် ထက်များတယ့် Background app Refresh သုံးဆွဲနေမှုက သင့် iPhone ရဲ့ Performance ကို မထိခိုက် နိုင်သော်လည်း Battery % ကိုတော့ နာကျင် စေပါလိမ့်မယ်။
တကယ်လို့ ကိုယ့် iPhone က Battery မှာ service မပြသေးဖူးဆိုရင် background app refresh ကို ကန့်သတ် မထားခြင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ သို့သော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် battery % လိုခြင်တယ် ဆိုရင်တော့ PowerBank သုံးပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ Background app တွေကို စပြီး ပိတ်ရပါ တော့မယ်။
ပထမဦးစွာ ကိုယ့် iPhone က Ram 2GB ဆိုရင် ကိုယ် အသုံးများဆုံး APPS (၄) ခုက လွဲလို့ အကုန် ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ (Admin ဆိုရင် Facebook, Chrome နဲ့ Game ၂ ခုကိုပဲ ဖွင့်ထားပြီး ကျန်တာ အကုန် ပိတ်ထား ပါတယ်) Ram 3GB ဆိုရင် (၁၀) ခု ဖွင့်ထားလို့ ရပါတယ်Ram 4GB ဆိုရင် (၂၅) ခုနဲ့ 6GB ဆိုရင်တော့ (၇၅) ခုထိ အများဆုံး ဖွင့်ထားလို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် iPhone 12 Pro & Max ကိုင်ထားသူတွေ အနေနဲ့ ဖွင့်ဖွင့် ပိတ်ပိတ် အကြောင်း မထူးပါဖူး။
Ram 1GB & 2GB သူလေးတွေကတော့ ကိုယ် အမြဲ သုံးနေတယ့် Apps 3-4 ခုက လွဲလို့ အကုန်ပိတ် ထားပေးပါ။ battery service ပြနေရင်တော့ Background App Refresh ကို လုံးလုံး ပိတ်တာ မပိတ်တာက သင် သုံးတယ့် ပုံစံပေါ မူတည်ပါတယ်။
App တစ်ခုကို ၁ နာရီ ခြား တစ်ခါလောက် ဖွင့်ပိတ် လုပ်နေရင်တော့ BAR ကို ဖွင့်ထားလိုက်တာ ပိုကောင်းပါမယ်။
Settings-General မှာ Background App Refresh ရှိပါတယ်။
No.5 Control Center ဆိုတာ Customize လုပ်လို့ ရပါတယ်
ခုချိန်မှာ လူပြောနည်းသွားပြီ ဖြစ်ပြီး သိပ်သတိ မထားမိကျ တော့တာက Control center အကြောင်းပါပဲ။ ယခင်က Control Center ဆိုတာ မူလ ပါပြီးသား shortcuts အချို့က လွဲလို့ ဘာကိုမှ ပြောင်းလဲလို့ မရပါဖူး။ အဲ့ဒါကလည်း Assistive Touch ရှိနေတာကြောင့်ပါ။
ယခုချိန်မှာတော့ Full screen gesture နဲ့အတူ Assistive Touch အသုံးပြုမှုကလည်း နည်းသွားကြပြီမို့ Control center ကို အသုံးဝင်တယ့် shortcuts အချို့ ထည့်သွင်း အသုံးပြုလို့လည်း ရလို့ လာပါပြီ။
Settings-Control Center ရဲ့ Customize Control မှာ ကိုယ် အသုံးပြုခြင်တယ့် အချို့ကို ထည့်သွင်း ထားလို့ရပါတယ်။ Admin ကတော့ Notes, Stop Watch, Screen Recording & Low Power Mode (၄) ခုလောက် ကို ထည့်သွင်းထားဖို့ အကြံပြု ခြင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခုတော့ ဒီလောက်မှာပဲ ရပ်ထားလိုက် ပါတော့မယ်။ နောက်ထက် tips တွေ အနေနဲ့ Settings နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ပဲ ထက်သိခြင် သေးလား အခြား အကြောင်းရာ တွေကိုပဲ သိခြင် သလား ဆိုတာ Users တွေ ဆုံးဖြတ် ပေးလို့ ရပါတယ်နော်။
ရေးသားသူ – Kaung Myat Phone Kyaw
iPhone 12 Pro Series နှင့် iPad Pro 2020 မှာ ပါဝင်တဲ့ LiDAR Scanner ကိုအသုံးပြု၍ လူတစ်ယောက်၏ အရပ်အမြင့်ကို တိုင်းတာနိုင်ပြီ
Myat Thura - 10/25/2020
iPhone တွေမှာ Battery 100% ပြည့်ရင် Notification ပြအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
Myat Thura - 10/12/2020
iOS 14 မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Camera အသုံးပြု၍မရတဲ့ ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ
Myat Thura - 09/22/2020
iOS 14 မှာ App icon အလှတွေ ပြောင်းသုံးကြမယ်
Myat Thura - 09/21/2020